Aha: Mikoyan-Gurevich 23. Russian ugbo elu na-dochie mig 21. Nyere na otu kọmputa kọmputa. Ọgbọ ọhụrụ, ọhụrụ engine, ọhụrụ Rada.
Ọ bụ otu n'ime ndị ụgbọ elu nke USSR mgbe elu nke ndị ahụ e USA efe efe na oge ha.
The ụgbọelu bụ nnọọ ụjọ, kpachara anya! Ofufe ya na uto n'ihi ya omume bụ ngwa ngwa. Dị Na 15 mba dị iche iche (repaints).
The Mikoyan-Gurevich mig-23 (Микоян и Гуревич МиГ-23 na Russian, NATO koodu Flogger) bụ a Soviet fighter na variable jiometrị, ike na-arụ ọrụ site na obere airfields na-agụghị oké nọgidere na-enwe. E site Mikoyan-Gurevich bụ nke mbụ Soviet fighter nwee ike ịchọpụta na itinye aka zaa efe efe n'okpuru ya, nke anya. A pụrụ iche version na ala agha na-ekenịmde. The mig-23 ahụ na nnukwu quantities si 1970, na mbupụ version bụ ka ná mmalite iri abụọ na narị afọ mbụ ka nọ mmachi na ọrụ dị iche iche mba gburugburu ụwa. (Wikipedia)